Podcast Kushambadzira: Nei Makambani Ari Kuisa Mari muPodcasting | Martech Zone
Podcast Kushambadzira: Nei Makambani Ari Kuisa Mari muPodcasting
China, Gunyana 21, 2017 NeChishanu, Gunyana 22, 2017 Douglas Karr
Mwedzi unouya ndiri kuenda kuDell kumusangano wekushambadzira wavari kupa vatungamiriri vebhizinesi mukati. Yangu chikamu chikamu chemaoko-apo ini ndinenge ndichigovana kuti podcasting yakura sei mukuzivikanwa, ndezvipi zvishandiso zvinodiwa, uye maitiro ekuburitsa, syndicate nekusimudzira yako podcast online. Ndiwo musoro wenyaya wandave kufarira pamusoro pemakore mashoma apfuura - uye ini ndichiri kunzwa sekunge ndiri kudzidza zvakanyanya mwedzi wega wega.
Kubva mumaonero angu, pane nzira chaidzo dzinogona kushambadzirwa nevashambadzi podcast yavo yekushambadzira.
dzidzo - tarisiro nevatengi vanofarira kuteerera podcasts kuti vadzidze zvakawanda nezve indasitiri yavo uye nemabatiro avanogona kushandisa zvigadzirwa nemasevhisi aunofanira kupa. Zvikamu zvedzidzo zvinogona kutungamira mukushandisa zvirinani, kuchengetedza, uye kunyange kukwidza mikana.
Maitiro - kunyangwe hutungamiriri hwako huri kubvunzurudzwa pane imwe podcast yeanokurudzira kana kuti wakoka munhu anokurudzira pane yako podcast, kuwedzera kuri kuita kwevateereri kwakakodzera kuedza. Kuunza inesimba kunopa kukosha kune vateereri vako pamwe nekusimbisa iwe sechiremera mune yako indasitiri. Kuwana podcast inokurudzira kuchakuzarurira vateereri vavo uye kukusimbisa sechiremera zvakare.
kushambadza - nepo makambani mazhinji asinga zviite, podcast inowanzo teererwa nevateereri vakatapwa. Ivo vari kuteerera, uye inguva yakanaka yekuvasuma kune chako chigadzirwa kana kuvapa sevhisi. Kanda mune yekupa kodhi uye iwe unogona kunyange kuyera kuti zvinokanganisa sei yako podcast kushambadza iri. Uye, hongu, ikozvino kune mikana yekushambadzira mune mamwe ma podcast!
Lead Generation - Ini ndakatanga yangu podcast nekuti ndaida kusangana nekushanda nevazhinji vatungamiriri muindasitiri yedu. Makore gare gare, ndakave neakanakisa bhizinesi hukama nemakambani atakabvunzurudza pane yedu podcast.
Peji rewebhuFX yakaisa iyi yakazara infographic pamwechete, Nei Podcasting Inokosha kune Vanotengesa, Kupa imwe nzwisiso nezve kukura, mapuratifomu, zvakanakira, metric, uye kushambadzira.
Tags: kushambadza pane podcastpodcast kushambadzirapodcast kushambadzirapodcasting
Chii Chinonzi Zvitsva Zvitsva zveGoogle Zvinotenderera Zvitsva Zvinoreva maAdWords Campaign?
Iyo yepamusoro 5 Yevatengi Sevhisi Zvinetso (Uye Maitiro Ekuvaruramisa)